China Hot itinye kpaliri ígwè waya eriri factory na-emepụta | Bangyi
Elu nke eriri waya na-eme ka ikuku nwere ụdị abụọ: ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na electro-galvanized. na-ekpo ọkụ-itinye kpaliri ụdị Hot-itinye kpaliri nwere mma mgbochi corrosion na mgbochi nchara arụmọrụ karịa electro-kpaliri.
Elu nke eriri waya na-eme ka ikuku nwere ụdị abụọ: ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na electro-galvanized. na-ekpo ọkụ-itinye kpaliri ụdị Hot-itinye kpaliri nwere mma mgbochi corrosion na mgbochi nchara arụmọrụ karịa electro-kpaliri. Ọnụahịa nke eriri waya na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ dị elu karịa nke a na-agbanye ígwè electro-galvanized.
Ndị ahịa na-eji ya n’èzí ma nwee ihe achọrọ maka ịrụ ọrụ nchara na-atụ aro ka ịhọrọ eriri waya waya na-ekpo ọkụ.
Usoro mmepụta nwere eserese waya, eriri na mmechi. Waya ịbịaru bụ ise a oké ígwè waya mkpanaka n'ime mkpa waya. Nddọ eriri bụ iji mepụta waya n'ime eriri, yana imechi bụ ịkpụgharị eriri n'ime eriri. Mgbe emechara usoro atọ a, ha na-enyocha nyocha dị mma, nkwakọ ngwaahịa, ma mesịa ghọọ ngwaahịa ikpeazụ.
Aha ngwaahịa Hot-itinye kpaliri ígwè waya eriri
Steel mezuwo 45 # / 55 # / 60 # / 70 # Carbon Nchara
Ọkọlọtọ AiSi, ASTM, DIN, GB, JIS, wdg.
Alloy Ma ọ bụ Na-abụghị alloy
Aha Akara Bangyi
Ndidi ± 3%
Usoro Ihe osise, Tọwara, na-emechi
Ọkwa 45 # / 50 # / 60 # / 70 # Carbon Nchara
Mbukota Osisi ukwu / eriri igwe / mpịakọta / Z2 mbukota
Elu Hot-itinye galvanizing
HS koodu 731210000
Ihe owuwu 1 * 7,7 * 7 （6 * 7 + FC, 6 * 7 + IWS, 6 * 7 + IWRC）, 1 * 19,7 * 19 (6 * 19 + FC, 6 * 19 + IWS, 6 * 19 + IWRC), 19 * 7, wdg.
Ngwa 1. disposable mkpọchi maka lọjistik, ọkụ eletrik, akpa, ụgbọ okporo ígwè, omenala, ịkụ azụ, njem, wdg. 2. Obere mmiri mmiri, mmiri, gas, mmanụ, ọkpọkọ ọkpọkọ. 3. Maka ime ụlọ na n'èzí ụlọ ahụ na-ewu ụlọ. 4. Ọtụtụ-eji scaffolding ewu
5. Guy waya maka Agricultural greenhouses, netting.
6. N'elu ala waya eriri maka ike nnyefe ahịrị.
7. Messenger eriri maka ekwentị na akara CATV.
8. Guy strand maka ike nkesa okporo osisi, poolu ekwentị na ngwa ndakwa nri na ụlọ elu redio.
9. Ihe nkwado ikuku si na ụlọ ndị eji arụ ọrụ.
10. Ihe mgbochi eriri na eriri okporo ụzọ nche.
11. Nsu, griin haus, uzo uzo, ulo ndu.
Nke gara aga: Galvanized ígwè waya eriri
Osote: Steel isi waya waya
China rụpụta kpaliri Steel Waya eriri
Electro kpaliri Steel Waya eriri
Steel Waya eriri kpaliri
Galvanized ígwè waya eriri
Eriri waya nchara nke nwere eriri isi
Electro kpaliri Steel Waya eriri, Eriri igwe anaghị agba nchara Waya eriri, Igwe anaghị agba nchara Waya eriri ịkwanyere ntekwasa, China rụpụta kpaliri Steel Waya eriri, Vkwanyere ntekwasa kpaliri Steel Waya eriri, Steel Waya eriri kpaliri,